Docker na Kubernetes: uru na ọghọm nke ha abụọ | Site na Linux
Isaac | | Netwọk / Sava, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
La virtualization aghọwo omume nkịtị, karịsịa na ọrụ igwe ojii iji nwee ike ịpụtakwu na sava na ebe data. Ma n'oge na-adịbeghị anya, njedebe nke dabeere na akpa bụ nke a na-enye iwu, ebe ọ na-enye ohere njikwa njikwa dị mma karị (site na ịghara ịmegharị usoro ụfọdụ). Ma ọ bụ n'oge a ka agha Docker na nke Kubernetes na-ebilite.
Abụọ dị ewu ewu oru, nke ị nwere ike ịmaworị. Ha abụọ nwere uru na ọghọm ya, yana ọdịiche dị iche nke ahụ nwere ike ịbụ isi ma a bịa inyere gị aka ịhọrọ oru ngo dịka mkpa gị ...
1 Kedu ihe njiri dabeere na akpa?
2 Gịnị bụ Docker?
3 Kedu ihe bụ Kubernetes?
4 Docker na Kubernetes
4.1 Docker na Kubernetes iche
4.4 Docker na Kubernetes: Mmechi
Kedu ihe njiri dabeere na akpa?
Dị ka ị maara, e nwere ọtụtụ ụdị nke ikedika ike zuru oke, paravirtualization, wdg. Ọfọn, na nkebi a, m ga-elekwasị anya na njikwa zuru oke nke a na-ejikarị eme ihe mgbe ị na-arịgo igwe na-emepụta ihe, yana igbe, ka ịghara iwebata mgbanwe ndị ọzọ nwere ike ịmegharị gị.
Igwe mebere- Ọ bụ iru-centric virtualization. Ọ dabere na hypervisor, dịka KVM, Xen, ma ọ bụ mmemme dịka VMWare, VirtualBox, wdg. Site na sọftụwia a, a na-e machineomi igwe anụ ahụ zuru oke (vCPU, vRAM, draịva diski, netwọkụ mebere, akụkụ, wdg). Ya mere, sistemụ arụmọrụ (ọbịa) enwere ike ịwụnye na ngwaike a na-arụ ọrụ ma site n'ebe ahụ, enwere ike itinye ngwa ma rụọ ọrụ n'otu ụzọ ahụ a ga-eme na sistemụ arụmọrụ.
Ihe nwere ike: Ọ bụ teknụzụ ọzọ nke ejiri otu ụdị mkpuchi ma ọ bụ igbe sandbox esonye na ya nwere ike kesaa ụfọdụ akụkụ nke usoro a zuru oke, nke na-arụ ọrụ nke ọma yana yana ụfọdụ uru nke njegharị na nchekwa nchebe (ọ bụ ezie na enweghị ọghọm) . N'ezie, kama ịnwe hypervisor, n'ọnọdụ ndị a enwere sọftụwia dịka Docker na Kubernetes nke ga-eji usoro ndị ọbịa kpọrọ onwe ha ọsọ ngwa dịpụrụ adịpụ. Ihe dị n'ime ya bụ na ọ na - enye gị ohere iwepụta ngwa ọdịnala sitere na OS n'onwe ya. Nke ahụ bụ, mgbe ị na VM ị nwere ike ịme ka Windows dị na Linux distro, dịka ọmụmaatụ, yana Windows ahụ ị nwere ike ịme ngwa ọ bụla maka ya, n'ime akpa ị nwere ike ịme ya naanị na ngwa ndị ụlọ ọrụ akwadoro, na nke a ikpe na Linux ...
Cheta na ndọtị ma ọ bụ nkwado nke ngwaike arụmọrụDị ka Intel VT na AMD-V ha jisiri ike melite arụmọrụ obere, na-ewere naanị 2% CPU n'elu. Mana nke ahụ emetụtaghị ihe ndị ọzọ dị ka ebe nchekwa ma ọ bụ nchekwa ahụ n'onwe ya nke ekenyepụtara maka ịbawanye ụba, nke pụtara nnukwu ihe enyemaka.
Ihe a nile bụ ihe ihe nkata na-abịa idozi, nke adịghị mkpa oyiri ụfọdụ usoro inwe ike idunye ngwa. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepụta akpa na ihe nkesa Apache, yana igwe arụmọrụ zuru oke ị ga-enwe sistemụ arụmọrụ, onye nlekọta ọrụ, sistemụ ndị ọbịa, na ngwanrọ maka ọrụ ahụ. N'aka nke ọzọ, na akpa ị ga - enweta sọftụwia na - arụ ọrụ a naanị, ebe ọ ga - agba n'ime "igbe" na iche yana iji sistemụ ndị ọrụ ahụ n'onwe ya. E wezụga nke ahụ, mwepụta nke ngwa ahụ dị nnọọ ngwa ngwa, site na iwepu OS ọbịa.
Gịnị bụ Docker?
Docker bụ oru mmeghe, n’okpuru akwụkwọ ikike Apache, edere na asụsụ mmemme Go wee jiri ya rụọ ọrụ ntinye nke ngwa n’ime ihe. Nke ahụ bụ, sọftụwia a ga - enyere gị aka ijikwa arịa dị iche iche sistemu, ebe ọ na - arụ ọrụ n'ọtụtụ nyiwe.
Mgbe Docker pụtara, o nwere ọtụtụ uru, ọ gbasakwara ngwa ngwa. Ọhụụ dịpụrụ adịpụ nke sistemụ arụmọrụ na ịdị mfe, kwere ka wuo arịa na ngwa, gbasaa ha, tụọ ha ma mee ha ngwa ngwa. A ụzọ ẹkedori niile ngwa ọdịnala na ị chọrọ na di ntakiri akụ oriri.
Na nchịkọta, Docker na-enye ihe ndị a atụmatụ igodo:
Mwepu site na gburugburu ebe obibi.
Ọnọdụ / mmekọrita.
Ma O nweghi nsogbu ufoduDị ka mgbe arịa ndị ahụ na-ahazi, na-ekwurịta okwu. Nke a bụ otu n’ime ihe kpatara butere Kubernetes ...
Dịka m ga-aza ajụjụ ma emechaa Ulo elu ugbo elu, Ọ ga-amasị m ịza na ọ bụ sọftụwia nke otu ndị mmepe Docker mebere ka ha nwee ike ijikọ usoro ndị agha Docker na ụyọkọ ma si otú a na-achịkwa ụyọkọ ahụ, yana na-achịkwa ihe ndị ahụ.
More banyere Docker
Kedu ihe bụ Kubernetes?
Google bu ụzọ kee ya, emesia nye ya Cloud Native Computing Foundation. Kubernetes Ọ bụkwa sistemụ Docker, oghere mepere emepe, enyere ikike n'okpuru Apache, ma ede ya site na iji mmemme mmemme Go. A na-eji ya rụọ ọrụ na ntinye na njikwa nke ngwa akpa. Na mgbakwunye, ọ na-akwado gburugburu ebe dị iche iche maka igbe na-agba ọsọ, gụnyere Docker.
Na njedebe, Kubernetes bụ orchestration n'elu ikpo okwu akpa nke nwere ọrụ maka inyere ndị dị iche iche nke igwe dị iche iche aka, njikwa ha, na nkesa ibu n'etiti ha. Ọ kachasị nzukọ ahụ nke mere ka ọrụ a bụrụ akụkụ dị mkpa n'ụdị ọnọdụ ndị a ...
Oge akpaghị aka.
Ike ịgwọ onwe onye.
Mbugharị na ntinye aka na akpaghị aka.
Ibu Ibu guzozie na kehoraizin ọnụ ọgụgụ.
Njupụta dị elu nke itinye n'ọrụ.
Ọrụ ndị metụtara azụmahịa.
Njikwa ngwa etinyere.
More banyere Kubernetes
Docker na Kubernetes
Dịka ị pụrụ ịhụ na nkọwa ahụ, ha abụọ yitere nnọọ n'ọtụtụ ụzọ, mana ị nwere esemokwu ha, yana inwe uru na ọghọm ha dị ka ihe niile. I nwere ike iche na ịmara ihe ndị a nile ị ga - amata ihe ị ga - ahọrọ, na - adabere na ebumnuche ị nwere.
Otú ọ dị, nsogbu ọ bụ ihe dị mgbagwoju anya karịa nke ahụ. Ọ bụghị banyere Docker na Kuernetes, ebe ọ ga - adị ka iji atụnyere ihe dị iche iche, ị ga - adaba na ndudue nke iche na ị ga - ahọrọ nke ọzọ. Nsonaazụ nke Docker na Kubernetes bụ ihe nzuzu, kama ị kwesịrị ijikọ teknụzụ abụọ iji nwee ike ịnapụta ma tụọ ngwa ngwa ngwa n'ụzọ ka mma.
Nke kachasị kwesị ekwesị ga-atụnyere Docker na Kubernetes. Nke ahụ ga-aga nke ọma, ebe Docker Swarm bụ teknụzụ egwu Docker maka ịmepụta ụyọkọ akpa. Agbanyeghị, ọbụlagodi na ọ gaghị aga nke ọma kpamkpam ... N'ezie, Kubernetes ezubere ka ọ na-agba ọsọ na ụyọkọ, na-enwe ike ịhazi ụyọkọ ọnụ ọnụ ọgụgụ na nrụpụta nke ọma, ebe Docker na-eme ya n'otu ọnọdụ.
Docker na Kubernetes iche
Chekwa ndị dị iche iche, ọ bụrụ na ịchọrọ ịma ihe divergences n'etiti Docker Swarm na Kubernetes, ha ga-abụ:
Kubernetes gụnyere ọtụtụ nhọrọ maka nhazi oru kọrọ na Docker Swarm.
Docker Swarm bụ dị mfe karị hazi ruru ya mfe. Na mgbakwunye, ọ dịkwa mfe ịbanye n'ime gburugburu ebe obibi Docker.
Kama, Nsogbu ndidi Kubernetes dị elu, nke nwere ike ịka mma na gburugburu dịka sava ndị dịnụ.
Docker Swarm bụ ngwa ngwa gbasara nkenye na gbasaa nke containers.
Kubernetes maka akụkụ ya na-enye nkwa dị ukwuu ka ụyọkọ ụyọkọ.
El Idozi ibu na Kubernetes ọ na-enye ohere ịhazi nguzo ka mma, ọ bụ ezie na ọ bụghị akpaka dịka na Docker.
Kubernetes na-enye mgbanwe ka mmaọbụna na ngwa mgbagwoju anya.
Docker Swarm ga - akwado 2000 ọnụ, jiri ya tụnyere 5000 na Kubernetes.
Kubernetes bụ kachasị maka ọtụtụ obere ụyọkọ, ebe Dockers bụ maka nnukwu ụyọkọ.
Kubernetes bụ gbagwojuru anya, Dị Mfe Docker.
Kubernetes nwere ike ikwe ịkekọrịta ebe nchekwa n'etiti akpa ọ bụla, ebe Docker na-ejedebe oke ma na-ekerịta naanị n'etiti igbe na otu pọd ahụ.
Docker Swarm na-enye ohere iji ngwanrọ nke atọ maka ịbanye na nlekota, Kubernetes gụnyere ngwa arụnyere ya.
Docker na-ejedebe na 95.000 igbe, ebe Kubernetes nwere ike ịkwado ihe ruru 300.000.
Ọ bụ ezie na Docker nwere obodo ukwu Kubernetes nwekwara nkwado nke ụlọ ọrụ dịka Microsoft, Amazon, Google, na IBM.
Docker na-eji ụlọ ọrụ dị ka Spotify, Pinterest, eBay, Twitter, wdg. Ọ bụ ezie na Kubernetes na-ahọrọ 9GAG, Intuit, Buffer, Evernote, wdg.
Hụ ụfọdụ divergences, ugbu a ọ bụ n'aka nke na uru nke obula:
Mfe nhazi nke oru na pọd.
Mepụtara Google, ya na ọtụtụ ahụmahụ n’igwe ojii.
Nnukwu obodo na ngwa ngwa orchestration.
Nhọrọ dịgasị iche iche nke nchekwa, gụnyere mpaghara Sans na igwe ojii.
Oru oma ma dịkwa nfe mbido mbụ.
Tracks akpa nsụgharị iji nyochaa ọdịiche.
Ezigbo iche iche n'etiti ngwa.
Na usoro nke ọghọm ya:
Mgbanwe ndị ọzọ dị mgbagwoju anya.
Mgbakwunye na nhazi nhazi dị mgbagwoju anya.
Ekwekọ na ẹdude Docker ngwaọrụ.
Mepụta ụyọkọ akwụkwọ ntuziaka dị mgbagwoju anya.
Ọ naghị enye nhọrọ nchekwa.
Nsonye na-adịghị mma.
Enweghị nhazi akpaka nke agaghi arụ ọrụ.
Omume ga-arụ na CLI.
Manual management nke otutu ufodu.
Chọrọ nkwado maka ngwaọrụ ndị ọzọ.
Ntughari ụyọkọ akwụkwọ ntuziaka siri ike.
Enweghị nkwado maka nlekọta ahụ ike.
Docker bụ ụlọ ọrụ na-aba uru na ụfọdụ n'ime ihe ndị dị egwu ya, dị ka Docker Engine na Desktọpụ Docker, abụghị isi mmalite.
Docker na Kubernetes: Mmechi
Dị ka ị pụrụ iche n'echiche, ọ dịghị mfe ịhọrọ n'etiti otu ma obu nke ozo. Agha Docker na Kubernetes dị mgbagwoju anya karịa ka ọ nwere ike iyi. Ihe niile ga-adabere na ebumnuche ị nwere. Otu ma ọ bụ nke ọzọ ga-adaba adaba, nke ahụ kwesịrị ịbụ ihe ịchọrọ.
N'ọtụtụ ọnọdụ ndị ọzọ, iji Kubernetes na Docker ga-aka mma nke niile nhọrọ. Ọrụ abụọ ahụ na-arụkọ ọrụ ọnụ. Nke a nwere ike melite nchebe akụrụngwa yana nnweta dị elu nke ngwa. Pụrụ ọbụna ime ka ngwa ọdịnala karịa scalable.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Netwọk / Sava » Docker na Kubernetes: uru na ọghọm ya
Daalụ nke ukwuu ! Ọ na-apụtawanye ìhè n’ebe m nọ, ma karịa ihe niile ịghọta na dịka n’ọtụtụ oge, ọ nweghị ihe ka mma ma ọ bụ ka njọ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị okwu nke ịhọrọ nke kwesịrị ekwesị.
Enwere ike achọrọ m ihe atụ doro anya karị iji ghọta nke otu ma ọ bụ nke ọzọ na-arụ ọrụ nke ọma, na nke ikpe iji ha ọnụ.
Ọzọkwa, olee ihe ndị ọzọ anyị nwere maka ụdị sọftụwia a?
Kedu ihe ndị anyị nwere ike ịmara banyere arịa nwere ike inye ya, iji hụ ezigbo ikpe n'echeghị ka ha rụọ ọrụ na nnukwu ụlọ ọrụ?
Echere m na ihe akọwara ebe a, docker bụ njikwa akpa, enweghị ike iji ya tụnyere Orchestrator.
Ntụle ahụ ga-adị n'etiti Docker Swarm na Kubernetes.
O doro anya na n'oge a na-ede ọmarịcha ọkwa a (ọ na-atọ m ụtọ nke ukwuu n'echiche m), agabigala ụfọdụ okwu.
Zaghachi Erikson Melgarejo